गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनवरी १ मा परीक्षण उडान, काठमाडौंबाट डाइभर्ट हुने जहाजलाई सजिलो « GDP Nepal
( Saturday, February 27, 2021)
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनवरी १ मा परीक्षण उडान, काठमाडौंबाट डाइभर्ट हुने जहाजलाई सजिलो
Published On : 23 July, 2018 7:56 am
काठमाडौं । भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदो जनवरी १ मा परीक्षण उडान हुने भएको छ । विमानस्थलका संरचनाहरु धमाधम बनिरहेका छन् भने धावनमार्ग पिचका लागि अलकत्रा ओछ्याउने काम सुरु भएको छ ।
३ हजार मिटर लम्बाई रहेको धावनमार्गमा तयार रहेको बेसकोर्शमा आइतबारबाट अलकत्रा हाल्ने काम सुरु भएको हो । विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख ईञ्जिनियर ओम शर्माले सन् २०१९ को जनवरी १ मा परीक्षण उडान गर्ने योजना रहेको र सोहीअनुसार तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
बेसकोर्शमा अलकत्रा राखेपछि त्यसमाथि तिन तहको पिच हुनेछ । आयोजना कार्यालयले जति सक्यो छिटो धावनमार्गको काम सकि त्यहीँबाट आन्तरिकतर्फको उडान सिफ्ट गर्ने जनाएको छ । साविकको विमानस्थलको धावनमार्ग भने ट्याक्सी वेमा परिणत हुनेछ ।
आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार जनवरी १ मा वाइड बडीकै जहाजले पनि अवतरण गर्न सक्नेछ । हाल विमानस्थलमा भौतिक पूर्वाधारका कामहरु ६० प्रतिशत सकिएको छ । यो विमानस्थल २०१९ भित्रै पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आउनेछ ।
यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपाललाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुञ्जेल वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता पूरा हुनेछ भने त्रिभुवन विमानस्थलमा समस्या आएमा जहाजलाई डाइभर्ट गरेर भैरहवामा अवतरण गराउन सकिनेछ ।
सर्वत्र आलोचनापछि सीडीएसले ल्यायो आईपीओ हेर्न छुट्टै पोर्टल
काठमाडौं । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)को नतिजा हेर्न छुट्टै पोर्टल ल्याएको
प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २३ देखिः ओली रणनीतिक, माधव प्रचण्ड अन्योलमै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले अन्ततः प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस
पशुपतिनाथ मन्दिरमा अब क्यूआर कोडबाटै भेटी !
काठमाडौं । हिन्दुहरुको पवित्र मन्दिर पशुपतिनाथमा अब नगदरहित भेटी भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ ।
एनआईबीएल ३५ वर्ष पूराः १२ लाख ग्राहक, १५५ अर्ब कर्जा प्रवाह
काठमाडौं। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल)ले स्थापनाको ३५ औं वर्ष पूरा गरेको जनाएको छ। बैंकले
स्व. आङछिरिङ शेर्पाको स्मृतिमा गल्फ प्रतियोगिता, विजेतालाई ५ लाखको टुर प्याकेज
काठमाडौं । हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका यती समूहका प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाको दोस्रो वार्षिक स्मृतिमा
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेका नेपाली र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई